Maskax-abuur ama maskax-dhisid ahaan farsamo lagu horumariyo mashaariicda garaafka | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Tricks, dhowr
Waqtiga qaar ama mid kale, Xirfadle kasta oo hal abuur leh wuxuu yimaadaa faaruqinta jiritaanka ah ee naga tagaysa fikradaha, Keenid lamadegaanka garaafka ah marka la fulinayo mashruuc. Sababtaas awgeed ayaa qalabka fikirka ama fikirka maskaxda oo ah farsamo lagu horumariyo mashaariicda garaafka ayaa ah ku habboon in maskaxda la furo oo naga caawiyo abuuritaanka mashaariic, helitaanka inaad na caawiso ka bax godka hal abuurka ah y curiyaan fikrado cusub.
Qalabkani wuu noo oggolaan doonaa furo maskaxda meelna iska dhig cabsida oo dhan markaad sii deynayso fikrad maxaa yeelay hawshan (ugu yaraan bilow ahaan) fikrad kasta way fiicantahay iyada oo aan loo baahnayn in si dhaqso leh loogu xukumo qiime. Diyaarso qalin, midabyo badan, sabuurad, koox dad ah oo raba inay ku qayliyaan fikradaha aan joogsi lahayn oo ay bilaabaan soo saarista fikradaha iyagoo raacaya talooyinka qaarkood ee ku saabsan sida loo isticmaalo qalabkan.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan si cad u qeexno marka la sameynayo a fikirka maskaxda: "wax walba waa suurtagal", fikrad kastaa way fiicantahay si kastoo waalida u muuqato marka hore. Markaan helno tan cad, waxaan bilaabi karnaa inaan shaqeyno dhibaato la'aan. Waa lagugula talinayaa abaabul koox la leh dad da 'kala duwan ah iyo shaqooyin kala duwan tan iyo markii uu khilaafkani gaadhayo a natiijo ballaaran. Marar badan fikradaha ugu fudud ayaa ah kuwa shaqeeya oo aad dhinac iska dhigto qaybtii hore ee fikirka ahayd aad ayey waxtar ugu leedahay xaaladahaas.
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho kicinta muuqaalka si loo helo sii ballaadhi maskaxdaTan waxaan uga shaqeyn karnaa jawi raaxo leh oo annaga nagu habboon, waxaan dhinac iska dhigeynaa fikradda ah inaan ka shaqeyno xabbad xiran xoogaa. Kicin muuqaal aad u faa'iido badan oo fudud marka la abuurayo fikrado, waa xiro istiikarada ama a Baladweyne leh midabyo badan oo karti u leh sawir qaadista, abaabulka nuxurka, qorshooyinka qorshooyinka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee mashruucyadayada.
Waan istaageynaa, qolka waxoogaa yar ayaan ku dhex soconnaa, keligeen ayaan ka fikirnaa daqiiqado, ka dibna waxaan bilaabaynaa maskaxda ka xoree.
Tallaabooyinka la raacayo waa kuwan:
Yeelo hadaf aad ku gaarto.
Sheeg fikradaha noocyadooda kala duwan, si kastoo ay u muuqdaan kuwo waalan.
Fikradaha qeybta dhamaadka.
La joog fikradda ugu dambeysa.
Si loo bilaabo waa inaan ogaanno waxa aan raadineyno iyo waxa aan dooneyno inaan ku guuleysano maskaxdan. Qeybtaan waxaan go’aansaneynaa mowduuca fikirka ku xoojinta leh ujeeddada si loo abuuro dhammaan socodka jawaabaha isla dhamaadka. Tusaale ahaan, aan dhahno waxaan leenahay ganacsi donut waxaanan raadineynaa fikrad xayeysiin soo jiidasho leh si si wax ku ool ah ugu dhexjirto isticmaalaha loona abuuro iibsiyo badan. Saldhiggan koowaad waxaan ku sameyn karnaa qorshe yar qaabkan (ka hooseeya sawirka).
Qeybta: Dukaanka Donut
Ujeeddo: soo jiidashada macaamiisha
Maskaxda dibadda u bax, u labbiso sidii dharka loo yaqaan 'donuts', u bixi 'donuts', ku qarin donuts meelaha u dhow, la ciyaar dadka isticmaala ...
Tani waxay tusaale u noqon kartaa qorshaha maskaxeed ee yar yar ee ay tahay inaan sameyno marka aan ku shaqeyno adeegsiga maskaxda. ka fikir mawduuc, ujeedo oo maskaxda iska daa.
Markaan ogaano mowduuca aan ka hadlayno iyo ujeedooyinka aan raadineyno, waxa xiga ee aan sameyno waa inaan bilowno fikradaha isdaba jooga ah "sida waalan". Mawduuca waqtiga ee qalabkani wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay ujeedadiisa wuxuuna noqon karaa waqti gaaban (10 daqiiqo) ama waqti balaaran (1 saac). Dhab ahaantii ma jiro waqti la sii cayimay halkii, isticmaale kasta wuxuu ku sameeyaa xawaare u gaar ah. Hadday run tahay inaan nafteenna ku qasbi karno inaan horumarinno imtixaanka annaga oo calaamadeyneyna waqti aan ka fogaanno wax badan oo isla fikradda ah oo aan iska sii sii dheereyno markaan mala awaalno. Hab kale oo maskaxdaada loogu oggolaan karo ayaa ah dejiso ugu yaraan fikradaha inuu nagu qasbo inaan si fiican u fikirno.
Ka dib markaan sii deynay dhammaan noocyada fikradaha "waalan ama aan ahayn" waxaan ku sii soconnay qaybta iyo xulor dhammaan kuwa sida ugu waxtar badan noo noqon kara.
Tusaale ahaan, waxaan u laabaneynaa kiisaska donuts oo waxaan qiyaasi karnaa natiijada qaar ka mid ah fikradaha ka dhashay arrintaas isdabamarin
fikradaha: ku labbisto dariiqa loo yaqaan 'donut street' si ay u soo jiitaan dadweynaha, u siiyaan deeq-bixiyeyaasha dariiqa iyadoo ay ku xiran tahay xaaladda booqashada dukaanka, sameyso haybad ballaadhan, ku ciyaarista waddooyinka, isticmaal shabakadaha bulshada -Tani waxay noqonaysaa dhammaan fikradaha ka soo ifbaxay dhiirrigelintan-
Dhamaan fikradaha, waxaan isticmaali doonaa (gabal) midkood laakiin waxaan ku dari doonaa fikrado kale.
Fikrad la xushay: Samee donut weyn
Fikradaha isku dhafan: Kula ciyaar ciyaarta dariiqa, isticmaal shabakadaha bulshada.
Qorshahan yar ee aan horay u qeexnay dhowr qodob oo taxane ah inaan raacno, waxaan ku bilaabi karnaa inaan si cad ugu sheegno waxa aan dooneyno inaan sameyno iyo waxyaabaha noo muhiimka ah. Tallaabada xigta waxay noqoneysaa in la sii kala qeybiyo fikradahaas oo la nadiifiyo a «Superideamegaguayfinal» (Waa inaan marwalba qiimeynaa fikradaheena) inaan awoodno inaan ku sameyno qaab jaantus ah, sawir, qoraal ama qaab kasta oo kale oo nagu soo dhaca.
Xaaladdan oo kale ayaannu qeex fikradda iyadoo si fudud loogu sharraxayo qoraalka:
«Superideamegaguayfinal shirkad deeq bixiya»: Waxaan dooneynaa inaan soo jiidano dadweynaha, aan horumarino iibkeena, ka dhigno shirkadeena mid sifiican loo yaqaan oo aan ka faa'iideysano shabakadaha bulshada. Waxaan ku guuleysan karnaa tan oo dhan haddii aan ku abuurnno weel ballaadhan bartamaha waddada (fikradda la doortay) halkaas oo aan ku dhiirrigelinno dadka inay ka qaybgalaan iyadoo la abuurayo nooc ka mid ah ciyaarta isdhexgalka (fikrad isku dhafan 1), sidaas darteedna loo helo waxyaabo soo jiidasho leh shabakadaha bulshada ee ugu weyn ( fikrad isku dhafan 3).
Waxaan ka soo gudubnay waxba la'aan oo aan haysanno koox fikrado suurtagal ah iyo tallaabo macquul ah oo ku aaddan adeegsadaha iyadoo la adeegsanayo maskaxdeena oo keliya oo aan u hamuun qaboojineyno fikradaha.
Waxaa lagugula talinayaa inaad u soo bandhigto fikradaha koox dad ah habka ugu soo jiidashada badan ee ugu macquulsan: tiyaatarka, sawir qaadista, jaantusyada… iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Qalabaynta maskaxda ama maskax-ka-dhigidda sidii farsamo lagu horumariyo mashaariic muuqaal ah